विदेश जाँदा धेरै कुरामा सचेत हुनुपर्छ । यी मध्ये एक कुरा भनेको तपाईले साथमा लाने सामान पनि हो । हरेक देशको आ–आफ्नै भन्सार नीति हुन्छ । सबै देशले देशभित्र भित्रिने वस्तुहरुको चेक-जाँच गर्छन् । देशैपिच्छे ल्याउन पाइने र नपाइने वस्तु भने फरक फरक हुन सक्छ । कुनै देशमा ल्याउने अनुमति पाउने वस्तुले अर्को देशमा अनुमति नपाउन पनि सक्छ ।विदेश जाँदा साथमा आफ्नो मात्रै सामान हुँदैन ।
तपाई जान लाग्नु भएको देशमा रहेका आफन्त, साथीभाइ वा चिनेजानेकाहरुले पठाउने खोज्नेहरुको सामान पनि कहिलेकाँही लगिदिनु पर्छ । आफूलाई चाहिएको सामान पनि त घरपरिवारबाटै यसैगरी पठाइन्छ । हैन र ? तर अरुको सामान वा उपहार लैजादा धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । थाहा नपाइकन कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरु लगेर विदेशमा फस्न पनि सकिन्छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा यसैगरी फस्ने नेपालीहरुको संख्या धेरै छ । यस्तो अवस्थामा ‘मलाई त थाहा नै थिएन ।’ ‘यो त मेरो सामान होइन, अरुको उपहार वा वस्तु ल्याइदिएको मात्रै हुँ,’ भन्ने जवाफ दिएर हुँदैन । अवस्था र ल्याएको सामान हेरेर कतिपय देशले त्यस्ता वस्तु जफत गरेर तपाईलाई प्रवेश गर्न दिन्छन् । केहीले भने व्यक्तिलाई फिर्ता पठाइदिन्छन् । केहीले भने आजिवन प्रवेश निषेध गर्ने वा कानून अनुसार सजाय दिन पनि सक्छन् । कोरियामा पनि साथमा ल्याउन पाइने र नपाइने वस्तुहरु छन् ।कोरिया आउँदा के ल्याउन मिल्छ र के चाँहि मिल्दैन, अरुले पोको पारेर दिएको झोलामा के के छ भन्ने कुराबारे निश्चित हुनु पर्दछ ।
अधिकांश मासुजन्य वस्तु र जीवजन्तुहरुलाई कोरियामा भित्रयाउने अनुमति छैन । धेरैजसो देशमा वस्तुभाउसँग सम्बन्धित रोगको प्रकोप फैलिएको छ । मासुबाट संक्रामक रोग फैलिने डर पनि छ । यो प्रतिबन्ध काँचो मासु, प्रशोधित वस्तु, हावा नछिर्ने डब्बामा प्याक गरेर विक्री गरिने वस्तु र प्लेनमा खाएर बाँकी रहेको वस्तु समेत पर्दछ । व्यक्तिगत प्रयोग होस् वा उपहार प्रयोजन जे भएपनि तल उल्लेख गरिएका मासुजन्य वस्तु कोरियामा ल्याउन पाइदैंन । सरकारी निकायले निर्यातका लागि भने निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी गरेको वस्तु भने यसमा पर्दैन ।गाई, सुँगुर, बाख्रा, भेडा र हरिण जस्ता जनावर अनि कुखुरा, हाँस, टर्की, अष्ट्रिच, बट्टाई, तित्रा लगायत चराका साथै घोडा, कुकुर, खरायो र माहुरीबाट निकालिने वस्तु समेत यो सूचिमा राखिएको छ ।・मासु, आन्द्राभुँडी–काँचो, जमाइएको, प्रशोधित वस्तु, सुकाइएको मासु ,अन्डा,हड्डी, बोसो, रगत, छाला, प्वाख, सिंग, खुर – छालाको व्याग वा ऊनीको स्वेटरमा भने लागू हुँदैन ।नतताइएको दूध, वी’र्य, निषेचित अन्डा, निषेचन नगरिएको अन्डा, मल, पि’साब,दूग्धजन्य वस्तु– १० केजी वा सो भन्दा थोरै परिणाम, विक्री वा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि होइन!गाईको मासु, हाम, ससेज, सुँगुरको मासु, मासुको पोको पनि कोरिया ल्याउन अनुमति छैन । यसको अर्थ विमान उड्नु अघि ह्यामबर्गर किन्नु भएको छ भने विमान चढ्नु अघि वा विमान भित्रै यो खाएर सकाउनु होला । तपाईले यसलाई कोरियामा ल्याउन पाउनु हुन्न । तपाई खेतबारीमा जानु भएको छ वा गाइवस्तुसँगको संसर्गमा आउनु भएको थियो वा जुत्तामा त्यहाँको फोहोर लागेको छ भने पनि क्वारेन्टाइन स्टेशनमा यसबारे जानकारी गराउनु पर्दछ । यसबारे बताउन सक्नु भएन वा झुटो बयान दिनु भयो भने तपाईले दण्ड पनि पाउन सक्नु हुनेछ ।
कोरियामा अधिकांश मासुजन्य वस्तु ल्याउन पाइदैन । तर कोरियामा निर्यातका लागि अनुमति सहितको निरीक्षण प्रमाणपत्र भएको वस्तु भने ल्याउन पाइन्छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डले भने सरकारी निकायबाट निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी गरेका छन् । त्यहाँबाट ल्याइने वस्तुमा यस्तो प्रमाणपत्र पनि साथमै हुन्छ । तर त्यस्ता प्याकेटको सिल क्वारेन्टाइन निरीक्षणभन्दा अगाडि नै फुटेको वा फुटाइएको छ भने चाँहि अवैध मानिन्छ ।स्वेच्छिक रुपमा फालिएको वस्तु नै भएपनि ‘एनिमल क्वारेन्टाइन सर्भिस’ (एक्यूएस)ले अनधिकृत रुपमा ल्याइएको मासुजन्य उत्पादनको कडाईका साथ छानबिन गर्दछ । यस्तो गरेको पाइएमा दन्ड-सजायको भागिदार समेत हुनु पर्छ । कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको विस्तृत जानकारी र बोर्डिङ पासको रेकर्ड राख्नका लागि निरीक्षण गर्न समेत निश्चित समय चाहिन्छ ।घरेलु पशु संक्रामक रोग नियन्त्रण कानूनमा उल्लेख भएअनुसार आयात निरीक्षणमा उत्तिर्ण नभइकन पशु वा पशुजन्य वस्तु ल्याएको पाइएमा तीन वर्षसम्मको जेल सजाय वा १० लाख वोन बराबरको जरिवाना तिराइनेछ ।भुँइकटहर, र्किड जस्ता केही फलफुल, तरकारी, अनाज, फूलको बिउ, बेर्ना र सुकाइएको फुल भने ल्याउने अनुमति छ । तर केही वस्तु ल्याउन भने सरकारको निर्यात निकायले जारी गरेको निरीक्षण प्रमाणपत्र समेत साथमा ल्याउनु पर्नेछ । यस्तो प्रमाणपत्र नभएको बोटविरुवा वा बेर्ना बोट संरक्षण ऐन अनुसार नष्ट गरिनेछ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन स्टेशनमा आफूले साथमा ल्याएको बोटविरुवाको साथमा निरीक्षण प्रमाणपत्र पेश गर्न र भन्सार निरीक्षण हुने ठाउँमा जानु अघि बोट निरीक्षण प्रमाणपत्र मोहरको सुरक्षा गर्न चाँहि बिर्सनु हुँदैन । तपाईले ल्याउनु भएको बोट विरुवामा किट्नाशक औषधि नभएको सुनिश्चित भएपछि भने कोरिया ल्याउन पाइन्छ ।
के कोरियामा मासुजन्य चिज केहीपनि ल्याउनै नपाइने हो त ?
त्यसो होइन, कोरियामा आवश्यकताअनुसार जनावरको मासु, मासु मिश्रित सामान तथा खानाहरु ल्याउन पाइन्छ तर त्यसका लागि तोकिएका केही देशहरुबाट मात्र । कोरियालेे मासु आयात गर्ने केही देशहरु जस्तै अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डजस्ता देशहरुबाट इन्सपेक्सन सर्टिफिकेट (Inspection Certificate) का साथमा ल्याइएका मासुजन्य पदार्थहरुलाई कोरिया प्रवेशको अनुमति दिन्छ ।अन्य देशहरुबाट पनि आवश्यकता अनुसारका बस्तुहरु ल्याउन अनुमति पाइएका खण्डमा मासुजन्य पदार्थहरु जापान भित्राउन पाइन्छ ।
अहिलेसम्म मैले ल्याएको सुकुटी किन समातिएन ?
यो पनि धेरैको मनमा लागेको प्रश्न हो, “खै हामीले त सुकुटी ल्यायौं, तर केही पनि भएन” । तपाईले ल्याउँदा फेला परेन भने बुझ्नुस् त्यो तपाईको ‘शुभदिन’ थियो । सामान्यतया एयरपोर्टमा रहेका स्क्यानरहरुमा लगेजभित्र रहेका सामानको रंग र त्यसको आकारका आधारमा के सामान हो भन्ने छुट्याइन्छ । (अन्य तरिकाहरु पनि हुन्छन्, यो प्रारम्भिक तरिका हो) । त्यसैले थोरै मात्रामा रहेको सुकेको मासु (सुकुटी) र अन्य कपडा तथा सामानले मोडेर ल्याउँदा नदेखिनु सामान्य हो । त्यही सुकुटी धेरै मात्रामा भयो भने अवश्य फेला पर्छ र फालिन्छ । धेरैजनाको फालिएको पनि छ, तपाईले ल्याउँदा फालिएन भने त्यो तपाईको ‘गुडलक’ थियो । विमानस्थलहरुमा विशेष सुरक्षा जाँचका लागि तालिमप्राप्त कुकुरहरु पनि रहने भएकाले आलो मासु वा मासुजन्य चिजबिजको गन्ध छिटो थाहा पाउने हुन्छ ।तर गतबर्ष देखी कोरियामा जनावरको मासु मिश्रित सामाग्रीहरुको आयात र निर्यातमा नियमहरु फेरिएका छन् । विशेषगरि जनावरहरुबाट सर्ने रोगका कारण कोरिया भित्रने जनावरको मासु मिश्रित पदार्थहरु ल्याएको थाहा भएमा त्यसलाई गैरकानूनी मानी दण्डसजाय पनि तोकिएको छ पछिल्लो समय ‘नोवल कोरोना भाइरस’को जोखिमले कोरियाभरका ‘इन्ट्रि पोर्ट’हरुमा कडा चेकजाँच छ, नोवल कोरोना भाइरस पनि जनावरबाटै मानिसमा सरेको भन्ने प्रारम्भिक तथ्यका आधारमा पनि मासुजन्य पदार्थहरुमा कडाइ गरिनु स्वभाविक हो ।समग्रमा भन्नुपर्दा मासु तथा सुकुटीजन्य बस्तुहरु भित्रन दिनका लागि कोरियाका विमानस्थल पहिले केही लचिला थिए भने अहिले कडा भएका छन् । मासु, सुकुटीमात्र नभएर लेवलिङ नगरिएका जुनसुकै खानेकुरा,अचार, घ्यु, मसला, तथा नेपालमा पाइने घरायसी सामानहरुमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
नियमबारे थाहा थिएन, एयरपोर्टमा रोक्यो, अब के गर्ने ?
एक त नेपालबाट ल्याएको सुकुटी–मासु कोरियामा बसेर खान मन सबैलाई लाग्छनै अनि यि नियमहरु हरेकलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन, नियमबारे जानकारी भएपनि “यति त हो, के होला र?” भन्ने सोचाइले पनि कहिलेकाँही समस्यामा पर्न सकिन्छ ।कोरिया आउँदा हरेक एयरलाइन्समा २ वटा फारमहरु भर्न दिइन्छ । एउटा Embarkation/Disembarkation Card र अर्को Customs Declaration फर्म ।यदि तपाईसंग मासुजन्य बस्तु केही छ, अरु कसैका लागि केही सामान ल्याइदिनुभएको छ भने विना संकोच ‘कस्टम डिक्लेरेसन’ फारममा ति कुराहरु जनाउनुहोस् । त्यो फारममा तपाईले त्यस्तो सामाग्री केही छैन भनेर जानकारी दिनुभयो, अनि तपाईको लगेजमा नियमविपरित ल्याइएका सामान भेटिए भने तपाई सजायको भागिदार बन्नुपर्नेछ । कस्टम डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरुले तपाईको लगेज तथा झोला चेकजाँच गर्न खोजेका खण्डमा विना कुनै रोकतोक खोल्नुहोस् र के ल्याएको छु भन्नेवारे साँचो बताउनुहोस् । अनि मुख्य कुरा गल्तीमा माफी माग्नुहोस, आफुलाई यो नियमबारे थाहा नभएकाले ल्याएको र अव आइन्दा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने बचन दिनुहोस् । ढाँट्न वा पन्छिन खोज्नुभयो भने झन् फँस्ने सम्भावना हुन्छ ।
मलाई यो नियमबारे थाहा भयो, म के गर्न सक्छु ?
तपाईलाई यस विषयमा पहिलेनै थाहा थियो वा भर्खरै मात्र थाहा पाउनुभयो भने यो जानकारी अरुलाई पनि थाहा होस् र अरु कोही समस्यामा नपरोस् भन्नका लागि यो जानकारीलाई आफ्नो फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम या अन्य सामाजिक संजालहरुमा सेयर गर्नुहोस् । भनाइ नै छ, ज्ञान बाँढे, ज्ञान बढ्छ ।